Sidee inuu ka soo kabsado Email tirtiray in Outlook 2010, 2007, 2003, iwm
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Email tirtiray Muuqaalka
In kabsaday tirtiray email in Outlook
Haddii aad tahay qof user Muuqaalka ah, waa in aad u ogahay in dhammaantiin oo emails aad tirtiray waxa lagu kaydiyaa "masaxay Items" folder. Marka aad si qalad ah u tirtirto email muhiim ah, in aad u soo kaban karto, oo ay xaq u riixaya "masaxay Items" folder inuu ka soo kabsado email tirtiray in Outlook fudayd. Laakiin, kaliya qiyaasi: Maxaa dhacaya haddii aad la tirtiro emails ee "masaxay Item" folder? Ma suurogalbaa in kabsado emails Muuqaalka kuwanu? Haa, waa dhab ahaan suurto gal ah, adigoo isticmaalaya ah soo kabashada xogta , ilaa iyo inta emails tirtiray aan overwritten.
Qaado tallaabo deg deg ah: sida inuu ka soo kabsado email tirtiray ka Outlook
Si loo hubiyo in la tirtiro emails Muuqaalka aad la soo kabsaday karaa si guul leh, barnaamij soo kabashada xog lagu kalsoonaan karo oo waxtar leh waa mid aad u muhiim ah. Waxaan si adag ugu talinaynaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Labada aad u sameeyo dib u soo kabashada ee Outlook, Outlook Express, Outlook 2010, 2007, 2003, iwm .. Dooro version saxda ah sida uu nidaamka hawl gal.
Waxaad isku dayi kartaa version maxkamad free hoos ku qoran si aad u ogaato tirtiray email Outlook. Soo qaado isku day ah!
Fiiro gaar ah: Marka loo helo email u tirtiray, inaad si fiican u badbaadin lahaa natiijada scan haddii aad rabto in aad u soo kabsado ka dib, u Ammaanka awgiis.
Next, aynu soo kabsado tirtiray email Muuqaalka in Windows tallaabo OS talaabo wada.
Sida ay sharaxaad ka mid ah hab kasta oo dib u soo kabashada, "Lost File Recovey" waa ikhtiyaarka ugu fiican inuu ka soo kabsado email tirtiray in Outlook. Waxaa Dooro iyo sii wadaan in ay tallaabada xigta.
Step2. Dooro Macintosh HD si scan
Dooro drive adag meesha barnaamijka email Muuqaalka waxaa lagu keydiyaa si scan email tirtiray. Sidoo kale, si loo tijaabiyo natiijada scan, aad "Dooro File nooca" karaa sida "Email", oo hubi "Enable Deep Scan" si loo kordhiyo suurtagalnimada ee soo kabashada email.
Step3. Hubi oo ka soo kabsado Muuqaalka email tirtiray
Scan ka dib, dhammaan emails Muuqaalka recoverable waxaa la helay iyo soo bandhigay. Waxaad ka eegi kartaa oo wada kabsadaan ka mid ah.
Okay, taasi oo dhan. Hadda waxaad u bilaabi kartaa adigoo!
Waxaa jira hal wax oo aad ku bixiso ku hadeeyey oo fiiro gaar ah u yahay in: Mar kale ha badbaadiyo files soo kabsaday oo uu meesha dhalshada. Raadi xijaab kale ama disk dibadda si ay u kaydiso, si loogu tixgeliyo ammaanka.
Video tutorial ah tirtiray kabashada email Odoroska